Sidee lo Jabiya ama lo furaa hadii Mopilkada Sumsung-ka uu kaaga xirmo Password Lock Screen ama Password-ka Shaashada+Sawiro+Video+Qoraal( Xal Deg Deg ah) ~ www.Ifiyahacilmiga.blogspot.com
8:48:00 PM Ciladbixin-computer 1 comment
Asc aqiyarey kuso dhawaada Hooyga Barashada Tichnlogyada Maanta waxaan halkaan idiin kugu so Gudbinaya qaabka aad u jabin kartit ama aad u masaxi kartit hadii Sumsung-kaada kaaga xirmo Lock Screen-ka ama aad iloowdo .
Runtii waxan fila hadii aad cashirkan daawato in ay Faa'iiido ku noqon doonto maxa yeelay lacag aya lagugu sameynaya haduu u kaaga xirmo marka so ma wanaagsana in aad barato qaabkan isla markaana aad Asxaabtada caawiso .
Fadlan ka taxadar Stepska si fiicana iskaga Fiiri Tilmaamaha ogoowna markaad Passwordk lock Screenka aad iska bixiso waxa baxayo waxa mopilka kuugu jiray yacnii waxan ka waa Datada sida Sawirada Videos-ka Nambarada ku save garesan Gameska IWM Fasdlan Back up sameso oo datadaada Xafidan marka hore inta aadan Shaqada Guda galin.
Hadaba Cashirka waxa uu ka kooban yahay Qoraal iyo Video marka la soco:
Raac Steps-kaan ama Talabooyinkan so socdo si aad u jabiso Lock Screenka kaaga xiran mopilkaada:
Step1-Dami Marka hore Mopilkaada
Step2-Kadib u taabo si wadajir ah volume up + home button + power button hadii aan Afsoomali kuugu Fasiro intan waxa hal mar isla taabane Meesha laga dheereyo codka ee kore dhexda iyo waliba meesha laga damiyo mopilka waxana heyne ilaa aad ka aragto calaamada Samsung.
Eeg Sawirkaan hoose:
Step3-waxaad arkeysaa shaashad Madow ay ku qoran tahay 5-aan waxyaabood ee so socda sida:
1) Reboot data
2) Wipe Data/ Factory reset
Lkn waxa ka dooraneyna inaga meesha ay ku qoran tahay Wipe Data/ factory reset.
ogoow aqrista hadii aad rabto in aad hoos uso socoto waxaad riixesaa meesha laga gaabiyo codka ee bidixda jirta hadii aab rabto in aad kor aadana meesha laga dheereyo codka ee ka koreso aya taabane hadii aad rabto in aad wax ok ku dhahdana meesha laga damiyo aya taabane.
Step4-markaad doorato Wipe Data/ factory reset waxa uu ku keyna meel ay ku qoran yihiin no yes waxaa ka dalbane Yes.
Step5-waxa sii doorane Reboot kadibna riix Power buttonka ama meesha laga damiyo si aad u xaqiijiso.
Step6:wax yar sug ilaa mopilka uu Restarti iskugu diraayo kadib wuu so shidma wey dhamaatay.
Waxan filaa in aad ku raaxesan doonto Lacagtiina wey kuu baaqatay oo meesha sameyska kkkkk.
Sidoo kale hadii aad Fahmi weyday Stepskii aan kaso hadalnay Daawo Video-ga hoose:
sidoo kale daawo Video-gan kale hadii uu kugu adkaaday Videogii hore:
Stepyadii aan kor kuso dhegnay oo English ku qoran:
2.Press together volume up + home button + power button until Samsung logo appears
5.Select "reboot" and push power to confirm
Fadlan Asxaabtadda la wadaag si ay iyagana uga Faa'iidestan
sidoo kale Like Saar Websitka
Wixii su'aal iigu so dir:alaqsaa1996@gmail.com
International Directory Blogspot August 16, 2016 at 2:33 PM